April 9, 2021 - Cele Fans
April 9, 2021 Cele Fans 0
ဂျူပီတာ လို့ခေါ်တဲ့ ကြာသပတေးဂြိုလ်ကြီးက ဒီနေ့ည ၁၁း၃၀ ဆိုရင် ကုမ်ရာသီနယ်ထဲကို ခဏကူးပြောင်းလိမ့်မယ် အဲဒီအတွက် ကောင်းတာတစ်ခုက မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ရဟန်းသံဃာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျိန်စာသင့်ခြင်းကလွတ်မယ်။ (အမှန်တော့ ကျိန်စာသင့်တတ်ခြင်း လို့ပြောမှ ပိုမှန်ပါတယ်။) လူကြီးပိုင်းတွေ အတွေးလွဲပြီးလုပ်ဆောင်ချက်အားနည်း နေတာတွေလည်း ပျောက်ပြယ်မယ်။ အတွေးအ‌ခေါ်တွေပိုမှန်လာမယ်။ပိုပြီးပြတ်သားလာကြမယ်။ ဘာသာတရားကိုပြီးကိုင်းရှိုင်းလာကြမယ်။ ဒါပေမဲ့ စားရိတ်စကတွေအကုန်အကျများတော့မယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုတာ‌တော့ အတိအကျပြောပြဖို့မလွယ်ဘူး။သတိထားစရာတွေလည်း ပိုများလာတယ်။ အတိုက်အခံတွေလည်း ပိုများလာလိမ့်မယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဂျူပီတာပြောင်းတာကို ကျနော် သဘောကျပါတယ်။ အဆိုးထဲကအကောင်းပါပဲ။ […]
သမီးလေး မွေးပြီးပြီးချင်း နောက်နေ့မှာပဲ ဝရမ်းထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ သူမရဲ့အဖြစ်ကို ပြောပြလာတဲ့ ချမ်းချမ်း
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် ချမ်းချမ်းတစ်ယောက် လက်ရှိမှာ အီတလီနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေပြီး ဒုတိယသမီးရတနာလေးအား အောင်မြင်စွာနဲ့ မွေးဖွားခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ကလေးမမွေးခင် အချိန်ထိကို တော်လှန်ရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကနေ ကူညီခဲ့သူပါနော်။ အခုလို ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် စစ်ကောင်စီရဲ့ ၅၀၅(က) ဝရမ်းထုတ်ခြင်း ခံခဲ့ရတာပါနော်။ Facebook Team ကလည်း သူမရဲ့ အကောင့်အား ခုနှစ်ရက် banned ထားတာကြောင့် ရက်ပိုင်းလောက် ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရတာပါနော်။ ဒီညနေမှာ Facebook ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရပြီပဲ ဖြစ်ပြီး […]
ပြေတီဦး နဲ့ အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ဇနီးမောင်နှံ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရ
အကယ္ဒမီ ေျပတီဦး နဲ႔ အကယ္ဒမီ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံအား သူတို႔ေနထိုင္ရာ ဗဟန္းၿမိဳ့နယ္ေနအိမ္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ————————– အကယ်ဒမီ ပြေတီဦး နဲ့ အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ဇနီးမောင်နှံအား သူတို့နေထိုင်ရာ ဗဟန်းမြို့နယ်နေအိမ်တွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြေတီဦးနဲ့အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ ဇနီးမောင်နှံကို သူတို့အိမ်မှာ ဖမ်းမိကြောင်း ည ၈နာရီ MRTV သတင်း မှာ ကြေညာ
မြန်မာစစ်တပ် အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ နိုင်ငံတော် အရေးပေါ် ကာလ ကြေညာတဲ့ သက်တမ်းဟာ အလွန်ဆုံး သက်တမ်း ၂ နှစ်ထက်ပိုမှာမဟုတ်ဘဲ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနဲ့အညီ အာဏာကို ထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်မနေ ကျင်းပမှာဖြစ်သလို အနိုင်ရတဲ့သူကို အာဏာလွှဲပေးမယ့်အကြောင်း စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီ ပြောခွင့်ရ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်း ကဒီနေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ထပ်မံ ကတိပေးပြောဆိုပါတယ်။ “ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော အရေးပေါ်ကာလ ကြေငြာတာသည် ၂ […]
ဗြိတိသျှ ဘုရင်မကြီးရဲ့ ကြင်ယာတော် ဖိလစ်မင်းသားကြီးကွယ်လွန်
ဖိလစ်မင်းသားကြီး ကွယ်လွန် ဗြိတိသျှ ဘုရင်မကြီးရဲ့ ကြင်ယာတော် ဖိလစ်မင်းသားကြီးကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဘက်ကင်ဟမ်နန်းတော်က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ မင်းသားကြီးဟာ သက်တော် ၉၉ နှစ်ရှိပါပြီ။ ဖိလစ်မင်းသားနဲ့ အဲလိဇဘက်မင်းသမီးတို့ ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောင်ငါးနှစ်အကြာမှာတော့ အဲလိဇဘက်မင်းသမီးက ထီးနန်းစိုးစံပြီး ဘုရင်မကြီးအဖြစ် နန်းတက်ခဲ့ပါတယ်။ မင်းသားကြီးဖိလစ်ဟာ ဗြိတိသျှတော်ဝင်မင်းဆက်သမိုင်းမှာတော့ သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံး ကြင်ယာတော်မင်းသားကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ကင်ဟန်နန်းတော်က ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာတော့ “ဘုရင်မကြီးအနေနဲ့ ပူဆွေးဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲ သူ့ရဲ့ ကြင်ယာတော်ခင်ပွန်းသည် အီဒင်ဘာရာမြို့စား မင်းသားကြီးဖိလစ် […]
သူမမိသားစုကိုပါပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့အပြင် သူမကို နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုဆက်စပ်မှု (၃)ခုနဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့ အလှမယ်ဟန်လေး
သူမမိသားစုကိုပါပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့အပြင် သူမကို နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုအပါအဝင် ဆက်စပ်မှု (၃)ခုနဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့ MISS GRAND MYANMAR ကိုယ်စားပြု အလှမယ်ဟန်လေး ပရိသတ်ကြီးရေ Miss Grand Myanmar 2020 winnerဆုရှင် အလှမယ် ဟန်လေးက လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အ ကြောင်း အ ရာ တွေ ကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက ကြည့်ရှုသူ သန်းနဲ့ချီတဲ့ လူထုထံ ချပြနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ကိုယ်ကျိုးကို မငဲ့ပဲ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ် […]
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner Burgener ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်နိုင်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ပံ့ပိုးမှုနဲ့ ဆက်လက်ကြိုးစားနေတယ်လို့ အတွင်းရေးမှုးချုပ်ရုံး ပြောခွင့်ရ Stephane Dujarric က ကြာသပတေးနေ့ ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။ “ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ပံ့ပိုးမှုနဲ့ မစ္စ Schraner Burgener က မြန်မာနိုင်ငံထဲသွားရောက်နိုင်ဖို့ ဆက်ကြိုးစားနေပါတယ်။ သူ့ကို မြန်မာစစ်တပ်က နိုင်ငံတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ရော၊ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် […]
အမေရိကန်နဲ. မလေးရှား တိုက်လေယာဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံပေါ် ဖြတ်ပျံသန်း
အမေရိကန်နဲ. မလေးရှား တိုက်လေယာဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံပေါ် ဖြတ်ပျံသန်းပြ BWN ဧပြီ ၈ ရက် ဒီကနေ့ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မူမှာ အမေရိကန် တိုက်လေယာဉ် နှစ်စီး နဲ့မလေးရှား တိုက်လေယာဉ်ခြောက်စီးဟာ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံ မော်လမြိုင် မြို့ ဘက်ကို ဖြတ်ကျော် ဖျံသန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အမေရိကန် ရေတပ်လေယာဥ်တင်သင်္ဘောကြီး သီပိုဒိုရုစဗဲ နှင့် အလဗင်းဝင်း လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီးတို.မလေးရှားရေတပ်နှင့်အတူမလက္ကာရေလက်ကြား အနီးမှာတိုက်လေယာဉ်အစီး ၂၀ ကျော်ဖြင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့် ခဲ့ကြပါတယ်။ Photo Credit […]
မြန်မာ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းကို အမေရိကန် ဒဏ်ခတ်အရေးယူ
April 9, 2021 Cele Fans Comments Off on မြန်မာ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းကို အမေရိကန် ဒဏ်ခတ်အရေးယူ
မြန်မာအစိုးရပိုင် ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကို အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဌာနက ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့မှာ ဒဏ်ခတ်အရေးယူလိုက်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်သွားဖို့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ဆန္ဒပြသမားတွေအပေါ် လူသေဆုံးနိုင်တဲ့အထိ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတာတွေကို ဆက်လက်ကျုးလွန်နေတဲ့ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ အခုလို ပစ်မှတ်ထား အရေးယူရတာ ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်တိနီ ဘလင်ကင် ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ မြန်မာကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းက လက်ရှိ နေပြည်တော်မှာ ကမကထလုပ် ကြီးမှူးကျင်းပနေတဲ့ ကျောက်မျက်ပြပွဲမှာ […]